XOG RASMI AH:- Khilaaf xoogan oo soo kala dhex galay Xasan Sheekh iyo C/kariin Xuseen Guuleed – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG RASMI AH:- Khilaaf xoogan oo soo kala dhex galay Xasan Sheekh iyo C/kariin Xuseen Guuleed
Ilo xog-ogaal ah aynu ka heleyno xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in khilaaf aad u xoogan uu xilligaan soo kala dhex galay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed.
Khilaafkaasi ayaa yimid kadib markii madaxweynaha Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed uu 9-kii bishaan xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho kulan kula yeeshay Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Wasiirka arrimaha gudaha C/raxmaan Odawaa iyo Wasiiru dowlaha madaxtooyada Mahad Maxamed Salaad.
Mas’uuliyiintaan ayaa usoo bandhigay madaxweyne Guuleed inuu shaqada isaga tago, maadaama bishii hore ee July uu qaliin adag oo dhinaca wadnaha ah ku galay dalka Hindiya, dhakhtarkuna uu kaga digay inuusan qaban shaqooyinka ad-adag, islamarkaana uu u baahan yahay nasiino fiican, kana fogaado buuqa badan.
Madaxweyne Guuleed ayaa sidoo kale lagula taliyay inuu xilka ku wareejiyo C/raxmaan Odawaa oo haatan haaya xilka wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya, sidoo kalena uu Mahad Maxamed Salaad la wareego xilka wasiirka arrimaha gudaha, halka isagane uu qabto xilka wasiiru dowlaha madaxtooyada Soomaaliya.
Mas’uuliyiinta sare ee dowladda federaalka ayaa sheegay inay wal-wal weyn ka qabaan xaaladiisa caafimaadeed, maadaama xanuunkiisu uu kusoo beegmay xilli adag oo lagu wado in sanadkaan dabayaaqadiisa ay doorasho ka dhacdo dalka, iyaguna ay u baahan yihiin shaqsi si weyn uga soo ololeeyo dhinaca soo qorista xildhibaanada Galmudug.
C/kariin Xuseen Guuleed oo si adag uga horyimid arrinkaasi ayaa sheegay in caafimaadkiisu uu wanaagsan yahay, islamarkaana uu qabsan karo shaqadiisa, isagoona ku gacan-seyray soo jeedintooda.
Madaxweyne C/kariin Guuleed ayaa maalintii ku xigtay u cararay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, halkaas oo uu kula kulmay xubno uu ka mid yahay Jeneraal Cabdi Xasan Cawaale (Qeybdiid).
Kulankaasi ayaa kasoo dhex muuqday waxgarad iyo xildhibaano madaxweyne Guuleed ku deegaan ah, isagoo kadib u sheegay dalabkii madaxtooyada ee ahaa inuu xilka iska casilo, islamarkaana uu ku macneeyay dalabaadkaasi mid lagu doonayo in lagu in-qilaabo maamulka Galmudug.
Dhinaca kale, beesha uu kasoo jeedo madaxweyne C/kariin Xuseen Guuleed oo si xoogan uga hortimid qorshaha uu dhabarka ka riixaayo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxay u balan-qaadeen in booskiisa aanu nin kale la wareegi doonin, iyagoona ku hanjabay in af iyo muruqba ay ku difaaci doonaan.
Si kastaba ha ahaatee, lama oga sida uu khilaafkaasi ku dambeyn doono, iyadoona weli arrinku uu yahay mid weli la isku mari la’yahay, inkastoo la sheegayo in madaxweyne Xasan Sheekh uu dhinacyo kale u maraayo sidii uu arrinkaasi ku xalin lahaa.